मिथक : भगवान् विष्णु र लक्ष्मी ४ महिनासम्म सुत्ने ‘क्षीर सागर’ कहाँ पर्छ ? – yuwa Awaj
साउन ५, २०७८ मंगलबार 422
काठमाडाैँ : विष्णु पुराणका अनुसार भगवान् विष्णु र उनकी पत्नी सुत्ने सागरलाई क्षीर सागर भनिन्छ । क्षीर अर्थात दूधको सागर के हो ? त्यो कहाँ
थियो वा छ ? के यो सत्य हो वा कुनै मिथ मात्र हो ? यस्ता अनेक जिज्ञासा तपाईंको मनमा पनि उत्पन्न भयो होला ।
आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिन विष्णु क्षीर सागरमा सुत्न जाने पौराणिक मान्यता छ ।
यसरी सुतेका भगवान् विष्णु दम्पती (पत्नी लक्ष्मी) कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशी (ठूली एकादशी) का दिन उठ्ने विश्वास गरिन्छ । हरिशयनीका दिन तुलसीको बिरुवा रोपेर हरिबोधिनीका दिन तुलसीको विवाह गरिन्छ ।
भनिन्छ- गंगा स्वर्गलोकबाट खस्दा त्यसको वेग भगवान् शिवको जटाले थामेको थियो । आजपर्यन्त गंगा नदी शिवकै जटाबाट उत्पन्न भएर बगेको मानिन्छ । शिवको निवासस्थान (लोक) कैलाश हिमालय पर्वत मानिएको छ । उता भगवान् विष्णुको
निवासस्थान क्षीर सागर मानिन्छ । क्षीर सागर, जो मानसरोवर कुण्ड (ताल) को रुपमा समेत चिनिन्छ, यो कैलाश पर्वतबाट लगभग ४० किलोमिटर टाढा रहेको पौराणिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । मानसरोवर हाल तिब्बतमा पर्छ ।
कैलाश पर्वतकै काख (आसपास) रहेको यस तालको सतहको क्षेत्रफल ४१० वर्गकिलोमिटर रहेको छ । यसको अधिकतम गहिराइ ९० मी (३०० फिट) रहेको छ । यो उच्च भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित छ । समुन्द्री सतहबाट करिब ४ हजार ५९०
मिटरको उचाईमा अवस्थित यस तालकाे उत्तरमा कैलाश पर्वत पर्छ । तालको पश्चिममा राक्षस ताल रहेको छ । हिन्दू धर्मावलम्वीहरुको पवित्र तीर्थस्थल मानिने मानसरोवर बौद्धमार्गीहरुको पनि आस्थाको केन्द्र हो । हिन्दूहरुमा यो
विश्वास छ कि
जीवनमा एकपटक मात्र पनि यस तालको दर्शन गर्नाले मुक्ति पाइन्छ । यसमा एकपटक स्नान वा डुबुल्की मारेमा सीधै रुद्रलोक अर्थात स्वर्गमा स्थान पाइने विश्वास रहिआएको छ । कैलाश दर्शन यात्रा जाँदा बाटोमै पर्ने यो
तालबाटै पनि कैलाशको दर्शन गरेर तीर्थयात्री धन्य हुन्छन् ।
कैलाशको माथितिर स्वर्ग र तलपट्टि नर्क रहेको विश्वास गरिन्छ । विष्णु पुराणका अतिरिक्त शिव पुराण, स्कन्द पुराण, मत्स्य पुराण आदिमा कैलाश अध्याय अन्तरगत कैलाश, मानसरोवर र गंगा नदीको उत्पतिबारे रोचक कथा तथा यिनको महिमा वर्णन
गरिएको छ । क्षीर सागर अर्थात् मानसरोवरलाई रत्नको भण्डारका रुपमा समेत पुराणहरुमा वर्णन गरिएको छ । विष्णु भगवान् शेशनागको गद्दीमा क्षीर सागरमा सुतेको र पत्नी लक्ष्मीदेवी उनको सेवामा हर्दम निमग्न रहेको बताइन्छ ।
धनधान्यकी देवी लक्ष्मी समेत यही सागरबाट उत्पन्न भएको विश्वास गरिन्छ । यसकारण पनि क्षीर सागरलाई पवित्र मानिन्छ । भगवान विष्णु सर्वव्यापी भएर पनि मूल निवास क्षीर सागरमै रहेको मान्यता छ । संसारका सबै रत्न, वैभव सागरबाटै उत्पन्न
हुने मत समेत रहेको छ । पुराणहरुमा देवता–दानवले समुद्र मन्थन गरेको कथा पढ्न पाइन्छ । त्यो यही क्षीरसागर अर्थात् मानसरोबर थियो भनिन्छ । मन्दराचल पर्वतको मदानी र वासुकी नागको नेती बनाएर क्षीर सागर मन्थन गर्दा त्यहाँबाट
विभिन्न रत्न, विष र सर्मत निस्केको विश्वास गरिन्छ । मत अनुसार, क्षीरसागरबाटै कामधेनु गाई, कल्पवृक्ष, वारुणी देवी, अप्सराहरु आदि प्रकट भए । एकपटक मन्थन गर्दा कालकूट नामक विषको घडा निस्कियो र कल्याणहेतु शिवजे सो विष
अमृतघडा हातमा लिएका ध्वन्वन्तरी (ऋषि) प्रकट भए भने अन्तिममा लक्ष्मी देवी पनि समुद्र मन्थनकै क्रममा प्रकट भइन् । दानवहरुले अमृत घडा खोसेर खान लाग्दा भगवान विष्णुले नै मोहिनी रुप धारण गरी त्यो अमृत जति सबै देवताहरुलाई मात्र पिलाए र देवताहरु अमर भए ।
विष्णु क्षीरसागरका सुतेको समयलाई चतुर्मास भनिन्छ । हरिशयनीदेखि हरिबोधिनी एकादशी सम्मको यी ४ महिना चतुर्मास हुन् । विष्णु–लक्ष्मी सुतेकै कारण यी ४ महिनाभरि कुनै पनि माङ्गलिक कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता
रहिआएको छ । अर्थात् यी ४ महिना व्रतका रुपमा मान्नुपर्ने मत र विभिन्न चाडपर्व समेत पर्ने भएकाले पूजाआजामा मानिसहरु निमग्न हुन्छन् । धर्मकर्म तथा व्रतमा निमग्न रहनेहरु तुलसीको बिरुवा रोपेपछि सात्विक आहार मात्र ग्रहण गरेर
चतुर्मास व्रत बस्ने गर्छन् । यसरी चतुर्मास व्रत गर्नेले मासुजन्य पादार्थ खाँदैनन् । शाकाहारमा पनि मुला, भन्टा, मुसुरो, गहत, कुभिन्डो, ज्यामिर र भटमास खानु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । चतुर्मासभरि विवाह, व्रतबन्ध, गृहप्रवेशजस्ता मांगलिक
कार्य गरिदैँन । यी कार्य गर्न ज्योतिषीय मान्यताअनुसार मुहूर्त नै निस्कँदैनन् । चतुर्मासभरि कुनै पनि यस्ता शुभ मुहुर्त पञ्चांगले तय गर्दैन । चतुर्मास सकिएपछि भने माङ्गलिक कार्यहरूका लागि मुहूर्त निकालिन्छ । कार्तिक शुक्ल एकादशीदेखि
पूणिर्मासम्मको अवधिलाई भीष्मपञ्चक पनि भनिन्छ । भीष्मपञ्चक भरि भगवान् विष्णुको आराधना गर्नाले इच्छित फल पाइने विश्वासका साथ उपत्यकाका चारवटा नारायण मन्दिर (चाँगु, विशङ्खु, इचङ्गु र शेष)
लगायत बुढानीलकण्ठमा समेत भक्तजनहरुकाे ठूलाे घुइँचाे लाग्छ । विष्णु ब्युँझिएकाे र मांगलिक कार्यका लागि समेत साइत सुरु भएकाे अवसरमा खुसियाली साथ पूजा-आराधना गरी सकारात्मक भाव प्रकट गरिन्छ । सात द्वीप र सागर
Prevविद्यालय उमेरमै विवाह
Nextतनहुँको अकला मन्दिरमा मूर्ति चो’री
को’रोना सं’क्रमणको तेस्रो लहर ?
स्याउ त’स्करी प्र’करणः चार प्रहरीवि’रूद्ध का’रबाही सिफारिस